A na-akwanyere nduku ùgwù dị ukwuu - magazin "Potato System"
A na-eji nnukwu poteto eme ihe
NA ỌZỌ NA-EGO ỌF PR P NA NKWA NKE NOVOSIBIRSK
Gịnị mere ụdị poteto ndị Novosibirsk ji kee ya na-atọ ụtọ? Ọrụ ndị dị a doaa ka ndị ọkà mmụta sayensị setịpụụrụ onwe ha taa? Kedu ka ha si enyocha atụmanya nke ọrụ ha?
Akwụkwọ akụkọ ahụ "Usoro nduku" gwara ndị ọkachamara a ma ama na nduku ajụjụ niile a, na-eduga onye nchọpụta nke Federal Research Center "Institute of Cytology and Genetics of the SB RAS", Nwa akwukwo nke Nkà Mmụta Ugbo Nikolai Polukhin.
N’afọ 1978, ndị na-azụ Siberia mepụtara ụdị dị iche iche LINA: na-ekwenye ekwenye dị elu ma ka na-enweghị atụ na mgbochi ọrịa niile. Ngwongwo ihe nkpuru di iche iche di iche iche di oke onu, o dikwa nke nta “n’osisi vine” nke ndi Far Far ugbo zutara (karisia, site na mpaghara Amur) Ndị ọrụ ugbo na-ekwu na naanị Lina nwere ike iguzogide ibu oke osimiri: oke mmiri ozuzo, oke iru mmiri oge niile na, n'ihi ya, mbubreyo mbubreyo.
Afọ ise mgbe nke ahụ gasịrị, ụdị ahụ dị iche iche pụtara SAFO... O gosiputara onwe ya nke oma mgbe toro na nkata nke onwe: tọrọ ụtọ, buru ibu tubers. Oge ezumike bi na ya ji obi ụtọ were ya.
Ma ụdị abụọ ndị a bụ nke etiti oge, na ọnọdụ Siberia, ndị nke mbụ na-achọkarị. JNA: ọ na - ewe ihe ubi site na July 20, maka ihu igwe mpaghara nke a bụ nsonaazụ dị mma. Nsonaazụ ọzọ nke ndị na-azụ Novosibirsk bụ ọtụtụ ZLATKA: ufọt ufọt oge, na uto magburu onwe ya (Adretta dị n'ọbara ya, nke a bụ onye ndu na-enweghị atụ na usoro uto). O nwekwara oke mkpụrụ.
- Nikolai Ivanovich, bụ nduku n'ezie ihe dị mkpa ihe ubi maka mpaghara Novosibirsk?
Poteto dị mkpa maka Russia dum, ọ bụghị n'efu ka ha kpọrọ ya "achịcha nke abụọ". Maka ndị bi na Siberia na Far East, ọ na-abụkarị nri mbụ. Ogo oriri nduku na mpaghara ndị a ka dị elu karịa Ural na akụkụ Europe nke mba ahụ.
Ekwenyesiri m ike na poteto kachasị ụtọ na-eto na Siberia, ebe ọ bụ na ihu igwe nke mpaghara anyị dị mma maka imepụta ya. Mana ihe achọrọ maka ngwaahịa dịkwa njọ karị.
- Ndị na-azụ ihe nwere ihe ha ga-arụ ọrụ na ha?
N'ezie. Anyị na-elebara ntụziaka a anya mgbe niile. Ọkpụkpọ nduku na mpaghara Novosibirsk bidoro itinye aka na ihe karịrị afọ iri ise gara aga. Ọrụ a malitere na ụlọ akwụkwọ ahụ, Galina Petrovna Shushakova.
- Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na ọnọdụ nke oge a na-anwa ime mgbanwe maka ihe ndị ahịa ụlọ ahịa na-ahọrọ na mgbe ị na-ahọrọ ọtụtụ iche na anya, ịdị mma maka nchekwa ogologo oge, ọ bụghị na ụtọ nke tubers. Ndị na-azụ Novosibirsk na-eche ụdị a echiche?
Ruo ogologo oge, ozuzu anyị egeghị ntị na njirisi ndị dị na mpụga (ọdịdị tuber, agba akpụkpọ ahụ, omimi nke anya), yabụ ụdị mpaghara dị ala karịa na ndị ọzọ na-ama egwuregwu mba ọzọ "mara mma".
Ugbu a, ndị na-azụ ihe na-anwa ichekwa uru nke nduku Siberia, na-agbakwunye ntakịrị "azụmahịa" na akụ piggy nke uru. Ya mere, ụdị Sokur na Adar dị n'okpuru ule nyocha. Ma na-atọ ụtọ ma mara mma, anyị nwere nnukwu olile anya maka ha.
Anyị na-akwadebe abụọ ọzọ na-ekwe nkwa iche maka nyefe maka ọtụtụ ọnwụnwa na 2021: Alka na ngwakọ 154 (anyị na-erubeghị na aha).
- Kedu usoro ndị ọzọ Siberia ga - adị iche?
Anyị na-arụ ọrụ iji hụ na ụdị anyị dị iche site na mkpụrụ dị elu, uto magburu onwe ya, iguzogide ọrịa, kwesịrị ekwesị maka nchekwa ogologo oge.
- A na-ezube iwu osisi maka mmepụta nke ibe nke ụlọ ọrụ na mpaghara Novosibirsk PepsiCo... Nke a pụtara na iche maka nhazi ga-abụ na ina. Nke a ọ bụkwa ebe dị mkpa maka ozuzu na mpaghara ahụ?
Ahịrị anyị nke iche gụnyere ndị kwesịrị ekwesị maka nhazi n'ime poteto na ibe: Sappho, Zlatka, Lina. Na, n'ezie, ọrụ na ntụziaka a ga-aga n'ihu, ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche na ịmepụta ọtụtụ maka nhazi bụ ọrụ siri ike.
- Siberia Research Institute of Plant Production and Breeding bụzi ngalaba nke Federal Research Center "Institute of Cytology and Genetics of the SB RAS". Ihe ọ bụla agbanweela na ọrụ nke ndị na-azụ ihe nke ụlọ akwụkwọ nyocha ahụ mgbe ha sonyechara na Federal Research Center?
Ruo ọtụtụ afọ, a na-arụ ọrụ ozuzu na Research Institute na ọdịnala, dabere na ngwakọ na intraspecific na intraspecific. Ugbu a, anyị agafela n'ọkwa dị elu. Mụ na ndị ọrụ nke ụlọ nyocha genomic nke Institute of Cytology and Genetics, anyị na-eji ụzọ nke usoro akara akara. Itinye usoro ndị a n'ọrụ na-agba ọsọ ọsọ nke nsonaazụ nsonaazụ. Echere m na afọ a, anyị ga-anwale ụdị ngwakọ mbụ ejiri teknụzụ a.
- Siberia Research Institute of Plant Growing and Breeding bụ onye ama ama maka mkpokọta ọgaranya nke nduku. Gwa anyị ihe gbasara ya.
Inwe ọtụtụ nnakọta nke ihe atụ ndị mbụ na-enye anyị ohere iduzi ọrụ ozuzu ezubere iche na ọkwa dị elu. Nchịkọta anyị nọmba 338 in vitro ihe atụ, e nwere ụdị 185, nke nke 95 na-agbanwe agbanwe. Na nhọrọ anyị na-ejikwa "obi ọjọọ", nke anyị nwere ihe atụ 35. Anyị na-echekwa ihe nlele 135 site na nchịkọta VIR (ihe atụ a natara n'okpuru usoro KNTP "Mmepe nke ozuzu na ịmị mkpụrụ na Russia").
Akụrụngwa nke nchịkọta anyị na-ejikarị ndị na-azụ ihe dị iche iche nke ụlọ ọrụ sayensị nke Siberia Federal District (Omsk, Kemerovo, Tomsk, Krasnoyarsk, wdg), ma ọ bụrụ na ha chọrọ ụdị ụfọdụ. na vitro, anyị nwere ike inye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu ọ bụla.
- SibNIIRS breeders enweta nnukwu omumu nduku mkpụrụ ihe. Kedu ka esi ere ngwaahịa ndị a?
Anyị na-eme ka ihe ọkụkụ na-eme ka ndị isi na-achịkwa ma na-ere ngwaahịa ndị a naanị n'ubi mkpụrụ. Na mpaghara Novosibirsk anyị na-akwado ụlọ ọrụ Agros na ngalaba nyocha na mmepụta nke Michurinets SPH. Anyị na-enyekwa mkpụrụ maka ụlọ ọrụ mkpụrụ na Altai Territory na Primorye.
Afọ a anyị na-eto mkpụrụ nduku anyị iche Lina na Zlatka maka ire ere. Anyị na-amalite ịba ụba Sokur ntakịrị (anyị nwere olile anya na ọ ga-zone). Na mgbakwunye, anyị na-amụba ụdị dị iche iche dị mkpa n'etiti ndị na-akụpụta nduku na mpaghara na ndị na-elekọta ubi: Rosara, Red Scarlett, Adretta, nke ụlọ akwụkwọ anyị bụ mmalite. Anyị na-ere naanị ihe akụrụngwa mara oke mma (asambodo enyere site na Russia Agricultural Center dabere na nsonaazụ PCR nke tubers). Na-enweghị nke a, enweghị ebe. Anyị nwere usoro iwu siri ike na Siberia.
- The Siberia Research Institute of Plant Production and Breeding bụ onye so na subprogram "Development nke nduku ozuzu na mkpụrụ mkpụrụ na Russian Federation" nke Federal Scientific na Nka na ụzụ Mmemme maka Development nke Agriculture maka 2017-2025. Gwa anyị ọrụ dị iche iche na-eche ndị na-azụ ihe ma gịnị bụ mkpa ịbanye na subprogram a maka ụlọ akwụkwọ ahụ?
Ọrụ anyị bụ: imepụta ụdị dị iche iche dị elu na njirimara ndị na-ezute mmepụta na oriri oge a, na-echekwa ma na-agbasawanye nchịkọta maka nhọrọ na vitro na n'ime vivo, mmepụta nke amalite ihe (minitubers) na nrụnye aeroponic na hydroponic na ọnụọgụ nke na-eme ka usoro mmepụta mkpụrụ (na 2019 - 20 puku iberibe; na 2020 - puku 23, na 2021 - 25 puku iberibe); huu mmeputa nke nkpuru nkpuru nke uzo di elu (na 2020 - 48 tọn, na afọ ndi sochirinye)
Enwere m ike ịmara na mmejuputa iwu nke subroutine dị ezigbo mkpa maka anyị. N'ịbụ ndị sonyere na ya, anyị nwetara nkwado siri ike site na steeti. Ego ejiri ego ahụ mee ka ihe na teknụzụ dị ọhụrụ: ha wughachiri ụlọ nyocha biotechnological, wụnye osisi aeroponic na hydroponic maka mmepụta nke ndị na-emepụta ihe, ndị na-azụta ihe, ndị na-akpụ ihe ndina, ndị na-akụ osisi, na ngwakọta. Anyị na-emecha owuwu nke ebe nchekwa ihe ọgbara ọhụrụ. Azụlite nduku na SibNIIRS ka a na-eme n'oge a taa, ndị sayensị anyị nwere mmetụta siri ike na a ka na-asọpụrụ poteto na mba anyị.
Ọkara ọkwa mbụ. Ahịa a na-erepụta 213-496 c / ha. Tuber bu oval. Anya dị ole na ole, ọkara miri emi. Ihe pulp na-acha ọcha. Ihe uka nke tuber a na-ere ahia bu 105-250 g. Akpukpo ahu di nma, odo. Starch ọdịnaya 11,2-18,5%.
Na-eguzogide ọrịa cancer na phytophthorosis na elu na tubers. Susceptible ka ọlaedo nduku nematode.
Tubers ndị kwesịrị ekwesị maka na mmepụta nke akọrọ nduku na ibe.
Ọkara ọkwa mbụ. Ahịa ahia 183-395 c / ha. Tuber bu oval nwere obere anya. Na rind bụ ìhè agba aja aja. Na pulp bụ creamy. Ugbo nke tuber ahịa nwere ike ịbụ 111-232 g. Ihe stachi bu 12,7-16,7%.
Eguzogide causative gị n'ụlọnga nke nduku cancer, ọlaedo nduku ahu otutu nematode, wrinkled na kee ya agbụ Mozis, akwukwo-Rolling virus. Tubers ndị kwesịrị ekwesị maka na mmepụta nke akọrọ nduku na ibe.
Zlatka dịgasị iche iche
Sokur dịgasị iche iche
Oge etiti oge. Ahịa ahia 162-406 c / ha.
A na-eji tubeli omimi miri mejupụta tuber. Ebube na-acha odo odo. Ihe pulp bu odo odo. Mbara nke tuber azụmahịa bụ 109-160 g. Ihe dị na starch bụ 15,7-18,0%.
Eguzogide cancer nduku, wrinkled Mozis na akwukwo mpịakọta virus. Adịkarịsịrị susceptible n'elu na moderately na-eguzogide ọgwụ mbubreyo blight na tubers. Emetu emetụta nematode.
Ọkara ọkwa mbụ. Ọ nọ n'okpuru nyocha dịgasị iche iche nke steeti.
Tuber bu oval dika odidi, anya ya adighi elu. Peel na-acha uhie uhie. Peeji na-acha odo odo.
Ọ nwere akwa stachi ọdịnaya na-eguzogide ọgwụ malitere ịrịa ọrịa na.
Early mfri eke dịgasị iche iche. Marketable mkpụrụ 196-360 c / ha.
Tuber bu oval-mechie na obere anya. Na rind bụ ìhè agba aja aja. Ihe pulp bu odo odo. Ahịa tuber dị arọ 110-200 g.
Starch ọdịnaya 14,3-15,1%.
Eguzogide causative gị n'ụlọnga nke nduku cancer, ọlaedo nduku ahu otutu nematode, wrinkled na kee ya agbụ Mozis, akwukwo-Rolling virus.
Tags: 2020 # 3nduku na-eto eto nke mpaghara novosibirskMkpụrụ na-eto eto nke mpaghara novosibirsknduku iche
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ Twụ Twins nke Moscow na-enye mmanya mmanya pụrụ iche
Ajụjụ gbasara onwe gị banyere poteto na-eto eto
Agriclọ Ọrụ Ugbo Russia na-ebipụta ọkwa nke ụdị ndị kachasị ewu ewu na isi ihe ubi na Russia
Ugbo nduku nke mpaghara Novosibirsk
DEULA-NIENBURG IHE URM ISTA Anyị B IS ỌMA gị!
Nkwakọ ngwaahịa: mbipute 2020. Banyere usoro ọmụmụ, akụnụba na ntakịrị ihe maka imewe
Na Belarus, e si na ọkara nke ebe ahụ egbute poteto
Akwụkwọ nduku System